प्रिन्ट संस्करण - आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी - समाचार - कान्तिपुर समाचार
मंगलबार पनि वार्ता हुन सकेन
श्रावण २५, २०७४-मुलुकभरका सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कार्यरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको अपिलसहित बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रँदै छन् । सरकारी उदासीनताको विरोधस्वरूप उनीहरूले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ (गोडान) ले आफ्नो विरोधलाई सरकारले अटेर गरे सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । गोडानको मंगलबारको आकस्मिक बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ‘डा. केसीका पाइलाहरूप्रति गोडानका तर्फबाट ऐक्यबद्घता जाहेर गर्दछौं,’ गोडान अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘हामी उहाँको जीवनरक्षा गर्न देशव्यापी रूपमा प्रतिकारमा जानेछौं ।’ अनशनको १६ औं दिनसम्म पनि सरकारले वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर कठोर निर्णय गर्नुपरेको उनले बताए । कागजी रूपमा माग सम्बोधन गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने प्रवृत्तिले केसीलाई ११ औं पटक अनशन बस्न बाध्य पारेको उल्लेख गर्दै डा. पाण्डेले सरकारले चिकित्सा शिक्षा र सेवामा संवेदनशील हुनुको सट्टा व्यापारीको आवाज बढी सुनेको बताए । केसीको १० औं अनशनका बेला पनि गोडानले दुई दिन देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गरेको थियो ।